Ngosipụta Mgbakwunye - BikeHike
Nkpughe nke njikọ ihe: Ụfọdụ njikọ dị na webụsaịtị a bụ njikọ mmekọ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị pịa njikọ ahụ wee zụta ihe ahụ, onye nwe webụsaịtị a ga-enweta ọrụ mmekọ. Agbanyeghị, onye nwe webụsaịtị a na-akwado naanị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ga-agbakwunye uru na ndị na-agụ ya. Onye nwe webụsaịtị a na-ekpughe nke a dịka Federal Trade Commission siri dị 16 CFR, Nkebi 255: Ntuziaka Banyere iji nkwenye na akaebe na mgbasa ozi.
Webụsaịtị a nwere ike ịnakwere ụdị mgbasa ozi ego, nkwado, ntinye akwụ ụgwọ ma ọ bụ ụdị nkwụghachi ụgwọ ndị ọzọ.
Nkwụghachi ụgwọ enwetara nwere ike imetụta ọdịnaya mgbasa ozi, isiokwu ma ọ bụ ozi emere na webụsaịtị a. Ọdịnaya ahụ, oghere mgbasa ozi ma ọ bụ biputere nwere ike ọ gaghị amata mgbe niile dị ka ọdịnaya akwụgoro ma ọ bụ akwadoro.
Enwere ike ịkwụ ndị nwe webụsaịtị a ụgwọ iji nye echiche maka ngwaahịa, ọrụ, weebụsaịtị na isiokwu ndị ọzọ dị iche iche. Ọ bụ ezie na onye nwe webụsaịtị a na-enweta ụgwọ ọrụ maka posts ma ọ bụ mgbasa ozi anyị, anyị na-enye echiche anyị n'eziokwu, nchoputa, nkwenye, ma ọ bụ ahụmịhe na isiokwu ma ọ bụ ngwaahịa ndị ahụ. Echiche na echiche ndị ekwuru na webụsaịtị a bụ naanị onye odee. A ga-enyocha nkwupụta ngwaahịa ọ bụla, ọnụ ọgụgụ, ngụ ma ọ bụ nnọchite ọzọ gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ site n'aka ndị nrụpụta, ndị na-eweta ma ọ bụ ndị otu a na-ajụ ajụjụ.
Weebụsaịtị a enweghị ọdịnaya ọ bụla nke nwere ike ị eweta esemokwu nke mmasị.
bikehike.org bụ onye so na Amazon Services LLC Associates Programme, mmemme mgbasa ozi mmekọ emebere iji nye ụzọ maka saịtị iji nweta ụgwọ mgbasa ozi site na mgbasa ozi na ijikọ Amazon.com. Amazon, akara Amazon, AmazonSupply, na akara AmazonSupply bụ ụghalaahịa nke Amazon.com, Inc. ma ọ bụ ndị mmekọ ya.
Njikọ Njikọ Amazon
Blọọgụ blọgụ nwere ike ịnwe njikọ njikọ Amazon, nke pụtara, ọ bụrụ na ị pịa wee zụta ugbu a ma ọ bụ debanye aha maka mmemme Amazon, bikehike.org nwere ike nweta ọrụ. Nke a anaghị akwụ gị ụgwọ ọzọ.